‘हलो’लाई छोडेर ‘गाई’ मा जानु पराजयको कारण
नगरकोट, ९ जेठ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता पशुपतिशम्शेर जबराले पहिलो चरणको निर्वाचनमा राप्रपाको चुनाव चिह्न ‘हलो’लाई छोडेर ‘गाई’मा जानु पराजयको कारण भएको बताएका छन्। रफत सञ्चार क्लबमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा नेता राणाले आगामी निर्वाचनका लागि पा...
Suvadin Media 704 0
पाल्पाली ढाका टोपी
काठमाडाैं, जेठ९– पाल्पा ढाका टोपीका लागि प्रख्यात जिल्ला हो। ढाका टोपी ढाकाको कपडाबाट बनेको पहिरन हो। यो मुख्य रूपले नेपालमा प्रायः सबै थरीका मानिसहरूले परम्परागत रूपमा लगाउने गर्दछन् । यसअघि ढाका टोपी नेपालको राष्ट्रिय पोशाक पनि थियो। पाल्पाली ढाकाटोपीलाई देशकै उत्कृष्ट ढाक...
जस्टिनको नाममा आठ रेकर्ड दर्ज भए गिनिज बुकमा
काठमाडाैं, जेठ ९–पपस्टार जस्टिन वीबरको नाम गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा आठ वटा रेकर्ड कायम भएका छन्। गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डको वेभसाइटमार्फत् गायकलाई प्रमाण पत्र दिनु अगावै रेकर्ड कायमको घोषणा गरिएको हो। प्रमाणपत्र जस्टीनलाई न्युयोर्कको मैडिसन स्क्वायर गार्डेनमा हुने पर्पस वल्र्ड टुरको...
Suvadin Desk 382 0
काठमाडाैं, जेठ ९– सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत तपार्इका विचारलार्इ समेटेका छाैं। यी विचार शुभदिन डटकमका हुने छैनन्।
Suvadin Desk 779 0
यी चार देशले पाएका थिए, राष्ट्रसंघकाे सदस्यता
काठमाडाैं, जेठ ९–संयुक्त राष्ट्रसंघ एक अन्तर्राष्ट्रि«य संस्था हो। यसको स्थापना २४ अक्टोेबर १९४५ मा भएको हो। यसमा हाल एक सय ९३ राष्ट्र आवद्ध छन्। इतिहासलाई नियाल्ने हो भने विस २०४९ (सन् १९९२) मा बोस्निया, हर्जगोभिना, क्रोएशिया र स्लोभेनिया संयुक्त राष्ट्रको सदस्यता प...
Suvadin Media 656 0
तीन दिन बित्दा पनि सुरु भएन मतगणना
भक्तपुर, ८ जेठ - भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा विवादका कारण मतगणना रोकिएको तीन दिन बितिसक्दा पनि सहमति नभएपछि मतगणना गर्ने कार्य अनिश्चित भएको छ । गत शुक्रबारदेखि मतगणनामा विवाद भएपछि रोकिएको मतगणना अझैसम्म पनि सुरु हुन नसकेको हो। सहमतिका लागि दलहरुबीच पटकपटक छलफल गरे पनि सहमत...
'कितने अादमी थे'
'कितने अादमी थे' बलिउड चलचित्र पारखीहरूकाे जनजिब्राेमा झुण्डिएकाे डायलग हाे याे। साधारण भाषा तथा यसकाे गहिराे प्रभावले यस डायलगलाइ कालजयी बनायाे। सन् १९७५ मा अाएकाे 'शाेले' फिल्मकाे अाइकाेनिक पार्टका रूपमा याे डायलग रहेकाे छ। भारतिय चलचित्रहरू मध्ये शाेले सदावहार फिल्म रह्य...
Suvadin Media 769 0
राँगाले पनि कमाउँछ बर्षकाे लाख!
बिनाेदवावु/बैतडी, जेठ ८ - सामान्य जीवनयापनकै लागी बिदेशीने युवालाई चुनौती दिदै बैतडीका एक युवकले उदाहरणिय रुपमा राँगोपालन गरी राम्राे अाम्दानी गरिरहेका छन्। व्यावसायिक पशुपालनमा जिल्लाको दोगडाकेदार गाउँपालिका ३ श्रीकोटका मानसिंंह बिष्टले पालेको राँगोले वर्षमा एक लाखभन्दा बढी...
Suvadin Media 1.1k 3
यसरी फुर्यो नन्दकृष्णलाई डेब्यु गीत
सानो उमेर पाहाडमा नन्दकृष्ण जोशी जंगलमा गोरु, भैसी चराउन जान्थे। गोठालो जादा उनको सहयात्री दाईहरु पनि रहने गर्थे । ‘दाईहरु अाे बाझ झुम्रेली बाझको भाकामा मिठो लय हाल्थे’ जोशी सम्झन्छन्, ‘उनीहरुले गाएको सो भाका त्यतिवेलै मेरो बालमस्तिष्कमा बसिसकेको थियो। पछि म पनि सो गीत गु...
सरकारी जागिर खाने मेराे सपना
मेरो नाम सुजाता बस्नेत । घर झापा । अहिले काठमाडौंमा अध्ययनरत छु । मेरो सपना सरकारी जागिर खानु हो र अहिले म त्यसको तयारी गरिरहेकी छु । म शाखा अधिकृतको तयारीमा छु । अहिले त्यसको 'कोर्सकन्टेन्ट' बारेमा विस्तृत रुपमा अध्ययन छु । विहान मेरो कलेज हुनाले त्यसबाहेकको समय म लोकसेवा...
Suvadin Media 758 1
काेतपर्व (भाग २)
शुभदिनकाे शुभरात्री श्रृंखला अन्तर्गतकाे #SuvadinMuseum मा अाइतबार हामीले नेपाली इतिहासकाे सवैभन्दा ठुलाे हत्याकाण्ड काेतपर्वकाे पहिलाे श्रृखंलाकाे सुरूवात गरेका थियाै। जसमा राजा राजेन्द्रका दुर्इ रानी मध्ये जेठी रानी साम्राज्यलक्ष्मीले भारदारहरू मध्ये पाण्डेहरूकाे सहयाेग पाएकाे र का...
Suvadin Desk 560 0
भारतकाे सिलगुढीमा साझाको शाखा
काठमाडौँ, ८ जेठ । साझा प्रकाशनले भारतको सिलगुढीमा पुनः शाखा सञ्चालन गर्ने भएको छ । आन्तरिक अव्यवस्थापनका कारण केही वर्षयता बन्द रहेको त्यहाँको शाखा खोल्न आवश्यक पूर्वाधार पूरा भएकाले शाखा सञ्चालन गर्न लागिएको प्रकाशनले जनाएको छ । भारतको विभिन्न क्षेत्रबाट काठमाडौँमा साहित्यिक सम्मेलनका...
Suvadin Media 359 0
काठमाडौँ, ८ जेठ, नेकपा (माओवादी केन्द्र) हेडक्वार्टरको बैठकले पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले प्राप्त गरेको नतिजा अपेक्षाकृत नै भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकले निर्वाचनको नतिजा अपेक्षाकृत भएको समीक्षा गरेको हो । पार्टी एकता...
Suvadin Media 519 0
काठमाडाैं, जेठ ८–सल्यान अदुवाका लागि प्रख्यात जिल्ला मानिन्छ। राप्ती अञ्चलमा पर्ने सल्यान पहाडी जिल्ला हो। अदुवा पहाडी जिल्लामा फल्ने नगदे बाली भएकाले पनि यसको खेती सल्यानमा गरिन्छ। नेपालमा सल्यानको अदुवा त्यस अर्थमा उत्कृष्ट मानिन्छ अदुवा खासगरी चैत÷वैशाख महिनामा रोपिन्छ। अदुवा...
अार्इपीएलमा यस्ता बने रेकर्ड
काठमाडाैं, जेठ ८– इण्डियन प्रिमियर लिग (अाइपीएल) काे उपाधि पुने सुपरजायन्ट्सले उचालेकाे छ। अाइपीएलमा थुप्रै रेकर्ड कायम भएका छन्। ती मध्ये केही रेकर्डहरू यहाँ समावेश गरेका छाैं।
रत्ननगर (चितवन), ८ जेठ - उपप्रमुख बनेको पहिलो दिन कुर्सीमा बस्दा ताराकुमारी काजी महतोलाई नौलो लाग्यो। पहिले सचिवको कुर्सीमा थिएन् अहिले उपप्रमुखको कुर्सीमा छिन्। माडी नगरपालिकाको उपप्रमुखको कुर्सीमा बसेपछि पहिलो दिन हिजो वडाध्यक्षसँग छलफल गरिन्। “परिचयात्मक कार्यक्रम भो, पहि...
Suvadin Media 556 0
काठमाडाैंमा ८८ हजार मत गनिए
काठमाडाैं, जेठ ८ - काठमाडौँ महानगरपालिकाको जारी मतगणनामा प्रमुखमा नेकपा (एमाले) का विद्यासुन्दर शाक्यले २९ हजार १२९ मत ल्याई अग्रता कायम राखेका छन्। नेपाली काँग्रेसका राजु राज जोशीले २० हजार ३६८, विवेकशील नेपाली दलकी रन्जु न्यौपानेले ११ हजार २५६, साझा पार्टीका किशोर थापाले आठ हजार ५२३...
Suvadin Desk 453 0
राेमाञ्चक फाइनलमा मुम्बर्इ एक रनले विजयी
काठमाडाैं, जेठ ८ - उपाधीका लागि १ सय ३० रनकाे मात्र लक्ष्य पाएकाे पुणे सुपरजायंट्सलार्इ एक रनले राेक्दै मुम्बइ इण्डियन्सले इण्डियन प्रिमियर लिग (अाइपीएल) काे दशाै संस्करणकाे उपाधी उचालेकाे छ। याेसँगै मुम्बर्इ तेस्राेपटक अाइपिएल च्याम्पियन बनेकाे हाे। अन्तिम अाेभरमा जीतका लागि ११ रन बाक...
Suvadin Media 627 0
यी हुन् स्थानीय सरकारका मेयर महिला
काठमाडाैं, जेठ ८–मुलुकमा संघीय संरचना अनुसार पहिलो पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट धेरै महिलाले पनि इतिहास रचेका छन्। वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाका दुुई सय ८३ स्थानीय तहमा भएको निर्वानको मतपरीणाम आउने क्रम जारी रहेको छ। सार्वजनिक मतपरीणाम अनुसार हा...
Yam Bahadur Bam 1.3k 1
यसरी मिठाे निन्द्रा सुत्नुहाेस
१) निदाउँने समय निश्चित हुनुपर्छ । तपार्इ हरेक दिन अाफ्नाे नियमित निदाउने र उठ्ने समय निश्चित गर्नुहाेस। २) अाफ्नाे काेठाकाे तापक्रम अाफुअनुकुल मिलाउनुहाेस। ६० देखि ६७ डिग्री तापक्रम भएकाे काेठामा मस्त निन्द्रा लाग्ने बैज्ञानिकहरू बताउछन्। ३) राति खाना खाने वित्तिकै नसुत्नुहाे...
Early risers tomorrow morning will be rewarded withafine pairing of the waning Crescent Moon to the lower left of Venus, remaining relatively low in the morning skies through the rest of this spring. Look for them close to due east near4o'clock, climbing higher but fading in the brightening...
Suvadin Media 459 0
डेढ महिना खर्चिएर रचिएकाे राष्ट्रिय गीत
व्याकुल मार्इला - २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछि पुर्नस्थापित संसदले विभिन्न ऐतिहासिक घोषणा जारी गर्यो। त्यसमा गणतन्त्र, संम्बिधानसभासँगै पुरानो राष्ट्रिय गानलाई खारेजी र नयाँ राष्ट्रिय गान निर्माण लगायतका बुदाँहरु समेटिएका थिए। संसदले सरकारलाई दिएको निर्देशन बमोजिम नयाँ राष्ट्रिय गीत खोजीको...
मानिसहरु भन्छन् नाममा के छ ? तर, एक अर्थमा सवैथाेक नाममै छ । हामी जति पनि मान्छेलाई चिन्छौ, जतिसँग परिचित छौ । नामकै कारण छौ । मैले जीवनमा धेरै मानिसहरुलाई भेटे । धेरैसँग भलाकुसारी भयो । उनीहरुलाई सम्झदा म नामबाटै सम्झन्छु, नामबाटै चिन्छु । मलाई चिन्दा, सम्झदा पनि उनीहरूले साथीहर...
Lekhpal Khatri 1.4k 8
काेतपर्व (भाग १)
नेपालकाे इतिहासमा अाज भन्दा १ सय ७१ बर्ष अघि ठुलाे हत्याकाण्ड भएकाे थियाे । जुन काेतपर्वका नामले चिनिन्छ । जंगबहादुर कुँवर उर्फ जंगबहादुर राणाकाे नेपाली राजनितीमा उदय साेही घटना पछि भएकाे हाे । उनलार्इ नेपाली इतिहासमा शाहस र क्ररताको प्रतिक मानिन्छ । कोतपर्वको कालोरातबाट उदाएका शा...
एमाले कार्यकर्ता चढेको गाडीमा वियरको बोतल र ढुङ्गा हानिए
मलेखु (धादिङ), ७ जेठ - मध्य धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिकामा शनिबार राति नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेस कार्यकर्ताबीच झडप भएपछि आज नेपाली काँग्रेसले धादिङ बन्द गराएको छ। झडपमा काँग्रेस र एमालेका सात कार्यकर्ता घाइते भएका छन्। काँग्रेस पूर्वसभापति रामनाथ अधिकारीको नेतृत्वमा सदरमुकाम धादिङबेसी&n...